နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: iPhone apps: Viber
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:08 AM
AMK December 3, 2010 at 8:06 PM
ကျေးဇူး ko Boyz
Ko Boyz December 3, 2010 at 8:09 PM
စလုံးကနဲ့ ထိုင်းက သူငယ်ချင်းတွေကို ခေါ်ကြည့်တာ ကြည်ချက်.. ကိုယ့်အနားကို လာပြောနေသလိုပဲ...။
ချစ်ကြည်အေး December 5, 2010 at 11:14 AM
သုံးကြည့်မယ် သူငယ်ချင်းတွေလဲ ပြောကြတယ် :)10Q
Ko Boyz December 5, 2010 at 11:28 PM
လောလောဆယ်တော့ ဖုန်းဖိုး သက်သာနေတယ်ဗျ...။ ကြည်လဲ ကြည်တယ်။
ကိုယ့် 3G ကလဲ လိုင်းပြည့်ရင် ပိုကြည်တာပေါ့ဗျာ...။
(ပွဲတုန်းက အစ်မကို မတွေ့ဖြစ်တာက အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့ပါ...။ လူကို ပြိုင်းသွားတာပဲ။ နောက်တစ်ခါ တွေ့ကြတာပေါ့နော် အစ်မ.. မောင်တီ ပွဲ တွေ့ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။)
Mr.Bean December 8, 2010 at 1:50 PM
myanmar ko call yin yaw ... ya lar?
Ko Boyz December 8, 2010 at 1:52 PM
the person u call must install viber apps. This is for viber apps to viber apps user only...
khin oo may January 2, 2011 at 10:33 PM